Vimeo Downloader - Vimeo မှ MP4 အခမဲ့ဖြစ်သည်
ဥပမာ - https://vimeo.com/259411563
Vimeo Downloader MP4 Format ဖြင့်ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ဗီဒီယိုရင်းမြစ်တွေနီးနေပြီ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Vimeo ကို mp4 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် MP4 ပုံစံမှမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆိုသင် download လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူသည်လင့်များကိုထုတ်ယူပြီးသင်ဗွီဒီယိုကိုကူးယူနိုင်သည်။ Vimeo မှ mp4 tool ကိုအသုံးပြုရန်မလွယ်ကူပါ။
1 Vimeo Downloader သည်တရားဝင်လား။
2 Vimeo မှ MP4 ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
2.2 အားလုံး browser များပေါ်တွင်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်
2.3 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်ပေါ်တွင် adware မရှိပါ
2.4 အကန့်အသတ်မရှိ downloads တွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်
2.5 Extension များကို Google Chrome တွင်ရရှိနိုင်သည်
3 Vimeo Downloader ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
လျင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်သင်၏ပရိသတ်နှင့်မျှဝေရန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့်ဗီဒီယို hosting, sharing နှင့် service platform ကိုသင်ရှာဖွေနေပါက။ ထိုအခါဤသူသည်သင်တို့ပြုသမျှကိုပြုရာ website တစ်ခုဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုများအား၎င်းတို့၏မူလတင်ပို့သူများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်မူပိုင်ခွင့်များကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသောဗီဒီယိုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလေးစားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားပြီးမူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆိုအသုံးပြုသူများအားဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်တရားမဝင်ပါ။
Vimeo မှ MP4 ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
ဤ Vimeo Downloader ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ သို့သော်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးများမှာအချို့ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုအခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါဘူး။ မှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) အပိုပရိုဂရမ်တစ်ခုကို install လုပ်ပါ။ popup မရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Vimeo မှ mp4 သို့ဗိုင်းရပ်စ်မရှိသည့်သန့်ရှင်းသည်။
Vimeo Downloader သည် Google Chrome IE၊ Opera, Safari နှင့်အခြား browser များတွင်အသုံးဝင်သည်။ Vimeo မှ mp4 ကိုလည်း Mac operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
သင်၏ကိရိယာအတွက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီဆိုလျှင်သင်သိမ်းထားသင့်သည်။ ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများမရှိပဲသင်ကြည့်လိုသည်များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
Extension များကို Google Chrome တွင်ရရှိနိုင်သည်
သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်သော Chrome extension တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့ကြသည် ဒီမှာထည့်ပါ.
အဆင့် ၁: သင်အကြိုက်ဆုံးဗွီဒီယိုများကိုရှာပါ။ လိပ်စာဘားတွင်ထို URL ကိုကူးပါ။
အဆင့် ၂: ပြန်သွားပါ Vimeo Downloader။ ထို့နောက်၎င်းကိုစာသားအကွက်ထဲသို့ကူးထည့်ပါ၊ Vimeo downloader သည်၎င်းဗီဒီယိုကိုချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ “ Start” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၃: သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဒေါင်းလုပ်သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏စက်ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် link တစ်ခုပေါ်လာမည်။
ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်! Vimeo နှင့် mp4 online သို့အွန်လိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲနောက်မှသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်
အင်တာနက် converter ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုအနည်းငယ်တွင်ဆိုက်တစ်ခုမှပုံတူတစ်ခုကိုရှာရန်ခွင့်ပြုရန်ဖော်ပြချက်အထက်ရှိ download ခလုတ်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မူလတင်ပို့သည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၊ သင်သည်ဤအွန်လိုင်း Vimeo Downloader ကိုအသုံးပြုလိုပါက Vimeo ကို mp4 သို့ download ပြုလုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဖန်တီးသူအချို့ကသူတို့၏ဗွီဒီယိုများကိုမတူညီသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရောင်းလိုသောကြောင့်သင်အားအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ချင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာကိုသွားဝယ်ဖို့သတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Vimeo မှ MP4 tool သည် MP4 format ဖြင့်အခမဲ့ download လုပ်ရန်လိုင်စင်ရဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်သာသင့်တော်သည်။ ဤဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူနှင့်အတူသင်ပိုင်ရှင်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဗီဒီယိုများကိုသာသင် download လုပ်လိမ့်မည်။
VidFrom သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာလိုအပ်ချက်များကိုလည်ပတ်ရန်အတွက်ဖန်တီးထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အမှားအယွင်းများနှင့်အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ရံဖန်ရံခါအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြfaceနာတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံအပိုထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အခြားလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူတစ် ဦး လိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပြောပြပါ။
5 /5(2မဲ )